ယင်း IP ကို-လိပ်စာရဲ့ MAC-BASED လိပ်စာထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
ယင်းချိတ်ဆက်ကွန်ယက်ကိုကိရိယာ၏ IP ကို-လိပ်စာကထိုကဲ့သို့သောပရင်တာပေါ်ပုံနှိပ်များအတွက်စာရွက်စာတမ်းအဖြစ်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် command ကိုစလှေတျရာအခွအေနအတွက်အသုံးပြုသူမှလိုအပ်သည်။ အပြင်ဒီကနေအများအပြားဥပမာရှိပါတယ်, ငါတို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်စာရင်းပြုစုမည်မဟုတ်။ တခါတရံမှာအသုံးပြုသူကွန်ယက်ဟာ့ဒ်ဝဲလိပ်စာသူ့ကိုမသိပေမယ့်လက်ပေါ်သာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၎င်း, MAC-လိပ်စာရှိရာအခြေအနေကိုနှငျ့ရငျဆိုငျဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအိုင်ပီရိုးရှင်းစွာလည်ပတ်ရေးစနစ်၏စံ tools များ၏အကူအညီနှင့်အတူထွက်ယူသွားတတ်၏ရှာပါ။
MAC- ၏ device ကို IP address ကိုဆုံးဖြတ်ရန်
ယနေ့တာဝန်လုပ်ဆောင်စေရန်, သာအသုံးပြုနိုင်သည် "Prompt ကိုဆင့်ဆို" သီးခြားအမှု၌ကို Windows, built-in application ကို "Notepad"။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ထိုသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွသင်ကြှမျးဝငျပါမညျယနေ့မည်သည့် protocol များ, parameters တွေကို, ဒါမှမဟုတ်အသင်းများကိုသိရန်မလိုအပ်ပါ။ အသုံးပြုသူအနေဖြင့်သာနောက်ထပ်သုတေသနအကျင့်ကိုကျင့်များအတွက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏မှန်ကန်သောရဲ့ MAC-လိပ်စာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါး၌ဤအညွှန်ကြားချက်သာသည်အခြားအိုင်ပီ devices များ, မသင့်ဒေသခံကွန်ပျူတာရှာနေသူမြားအားအလွန်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါရဲ့ MAC ဇာတိ PC ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ရန်။ ငါတို့သည်သင်တို့အပေါ်ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်အခြားဆောင်းပါးများဖတ်ပါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ငါဘယ်လိုကွန်ပျူတာရဲ့ MAC-လိပ်စာတွေ့နိုင်ပါသည်
Method ကို 1: လက်စွဲစာအုပ် Input command များ
အဲဒီမှာလိုအပ်သောထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်မယ့် script ကိုသုံးပြီးတစ်ဦး option ကိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အများဆုံးအထောက်အကူဖြစ်စေပြုလုပ်မှသာ IP ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖျော်ဖြေသည်အဘယ်မှာရှိအခွအေနအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးတည်းအချိန်များအတွက်ရှာဖွေရေးလွတ်လပ်စွာ console ကိုအတွက်လိုအပ်သောပညတ်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
app ကိုဖွင့်ပါ "Run ကို"သော့ကိုပေါင်းစပ်ချကိုင်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဦးဝင်း + R ကို။ အဆိုပါ input ကိုလယ်ပြင်၌ Enter cmdထို့နောက် button ကို click "အိုကေ".
ကိုလည်းကြည့်ပါ: မှာ Windows အတွက် "Command Prompt ကို" start လုပ်နည်း
ဒါဟာပထမဦးဆုံးဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်အိုင်ပီ-လိပ်စာများ Reading, တစ်ဦး cache ကိုမှတဆင့်အရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဖွဲ့ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်(1,1,254) @start / ခ ping ရဲ့ 192.168.1 လုပ်ပါ။ % ဟာ -n 2> nul အတွက် / L ကို% ဟာ။ ဒါဟာကွန်ယက် setting များကိုစံ, ဆိုလိုသည်မှာ 192.168.1.1 / 255.255.255.0 များမှာတဲ့အခါမှသာအလုပ်ဖြစ်တယ်သတိပြုပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အပြောင်းအလဲကိုဘာသာရပ်သောအဘို့ကို (1,1,254) ဖြစ်ပါသည်။ အစား 1 နှင့် 1 အဆိုပါပြောင်းလဲအိုင်ပီကွန်ယက်၏ကနဦးနှင့်နောက်ဆုံးတန်ဖိုးများကိုဝငျမြားနှငျ့အစား 254 - subnet mask ကိုခန့်ထား၏။ အမိန့်အားဖြင့်တံဆိပ်ထု, အဲဒီနောက်နှိပ် ဝင်ရောက်.
သငျသညျ propingovku Network တစ်ခုလုံးအပေါ် script ကို run နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစံ command ကိုတွေ့ဆုံဘို့ ping ရဲ့ဘယ်တစ်ဦးတည်းသာသတ်မှတ်ထားသောလိပ်စာစိစစ်သည်။ ဇာတ်ညွှန်းအားလုံးလိပ်စာများကိုတစ်ဦးအမြန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကို run ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အဆိုပါစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးစီးအပေါ်သို့ထပ်မံ input ကိုများအတွက်စံလိုင်းဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်သင် Command ဖြင့် cached မှတ်တမ်းများကြည့်ရှုရန်လိုခငျြ arp နှင့်အငြင်းအခုံ -a။ ပရိုတိုကော ARP (Address ကို resolution ကို protocol ကို) ကို console ကိုတှငျတှေ့ devices အားလုံးက output ပြ, အိုင်ပီဖို့ကိုက်ညီခြင်းရဲ့ MAC-လိပ်စာများကိုပြသသည်။ ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်အချို့သောမှတ်တမ်းများဒီတော့ချက်ချင်း cache ကိုစတင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကိုဖြည့်ပြီးနောက် ပို. ထက် 15 စက္ကန့်မစောင့်နေကြတယ်သတိပြုပါ, စာရိုက်arp -a.
ပုံမှန်အားဖြင့်, readout ရလဒ်များကိုတစ်ဦးက start command ကိုအပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းခင်းကျင်းပြသနေကြသည်။ ယခုတွင်သင်သည်အဲဒါကိုသက်ဆိုင်ရာ IP ကိုအတူရရှိနိုင်ပါရဲ့ MAC-လိပ်စာအတည်ပြုရန်နိုင်ပါတယ်။
စာရင်းရှည်လျားသည်နှင့်သင်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုသာယှဉ်ပြိုင်ကစားကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်, အစား arp -a အဆိုပါ cache ကိုဖြည့်စွက်ပြီးနောက်, command ကိုရိုက်ထည့်ပါarp -a | "01-01-01-01-01-01" ကိုရှာဖွေဘယ်မှာ 01-01-01-01-01-01 - လက်ရှိ MAC-လိပ်စာ။
ဒီနေရာတွင်တည်ဆဲရဲ့ MAC ကိုအသုံးပြုပြီးကွန်ရက် device ကို၏ IP-address ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီရန်ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါတယ်။ Considered နည်းလမ်းကိုအမြဲအဆင်ပြေမဟုတ်သောအရာကို manually input ကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီမှအသုံးပြုသူလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်, မကြာခဏဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့သူတွေကိုကျနော်တို့ကအောက်ပါနည်းလမ်းရည်ညွှန်း။
Method ကို 2: ဇာတ်ညွှန်း Creating နှင့် running
console ကိုအတွက်အလိုအလျှောက်စတင်ပညတ်တော် set ကို - ရှာတွေ့၏ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းဖို့ကျနော်တို့အထူး script ကိုသုံးစွဲဖို့တင်ပြသည်။ သင်သာကို manually, ဇာတ်ညွှန်းဖန်တီးပြုလုပ် run နှင့် MAC-လိပ်စာရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Desktop ပေါ်မှာ right-click နှိပ်ပြီးအသစ်တခုကစာသားစာရွက်စာတမ်းဖန်တီးပါ။
"=="% 1 "လျှင်" မ MAC address ကို & ထွက်ပေါက် / ခ 1 echo
အဘို့ / L ကို %% တစ်ဦးအတွက် (1,1,254) @start / ခ ping ရဲ့ 192.168.1 ကြဘူး။ %% တစ် -n 2> nul
ping ရဲ့ 127.0.0.1 -n 3> nul
arp -a | ရှာတွေ့ / i "% 1"
သင်ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းမှာသူတို့ကိုဖတ်နိုင်သောကြောင့်, ငါတို့သည်အပေါငျးတို့သအတန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင်အသစ်အဘယ်အရာကိုမျှထည့်သွင်းမထားဘူး, ဒါပေမယ့်လုပ်ငန်းစဉ် optimized နှင့်ထပ်မံ input ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာညှိနေသည်။ ဇာတ်ညွှန်း menu ကိုဝင်ရောက်ပြီးနောက် "File" ကို select "Save As ကို".
ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးမတရားဖိုင် name ကို Set Find_macထိုအခါခေါင်းစဉ်ပြီးနောက် append.cmdဖိုင်အမျိုးအစားကိုအောက်တွင် by "အားလုံးဖိုင်များ"။ အဆိုပါရလဒ်သင့်Find_mac.cmd။ Desktop ပေါ်မှာ script ကို save လုပ်ပါ။
desktop ပေါ်မှာပေါ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် file ကိုဤကဲ့သို့သောကြည့်ရှုမည်:
စတင် "Prompt ကိုဆင့်ဆို" အဲဒီမှာ script ကိုဆွဲယူပါ။
မိမိအလိပ်စာ string ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်, အဲဒီနောက်အရာဝတ္ထုကိုအောင်မြင်စွာတင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ spacebar နှိပ်နှင့်ဤပုံစံအတွက် MAC-လိပ်စာရိုက်ထည့်, အောက်ပါပုံရိပ်မှာညွှန်ပြအဖြစ်, အဲဒီနောက်နှိပ် ဝင်ရောက်.
အကြှနျုပျတို့သညျကိုအောက်ပါလင့်ခ်ပေါ်မှာငါတို့ပစ္စည်းများအချို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောကွန်ယက်ကိုထုတ်ကုန်၏ search အိုင်ပီ-လိပ်စာများ၏အခြားနည်းလမ်းများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအသိပညာမလိုအပ်ပါဘူးကြောင့်သူတို့သာနည်းလမ်းများရှိပါသည်တင်ပြနေကြပါတယ်။
ရှာဖွေရေးမျှရလဒ်များကိုမဆောင်ခဲ့ options နှစ်ခုပေးထားလျှင်ဂရုတစိုက်အုပ်ချုပ်ရဲ့ MAC ကိုပြန်စစ်ဆေးနှင့်ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးအခါ cache ထဲတွင် Entries တွေကိုအချို့ကို 15 စက္ကန့်ထက်ပိုရှည်မပေးသိမ်းဆည်းထားကြသည်ကိုမေ့လျော့မပေးပါဘူး။